बालुवाटारमा पोखिएका प्रचण्ड आशंका :: भानुभक्त :: Setopati
बालुवाटारमा पोखिएका प्रचण्ड आशंका
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उकुसमुकुस र आशंका अन्तत: पोखिएको छ।
प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एक्लाएक्लै भएको भेट र मंगलबार बालुवाटारमै भएको संयोजन समितिको बैठकमा आफ्ना कुरा खुलेर राखेका छन्।
प्रचण्डको मूल आशंका आउने महाधिवेशनपछि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व आफ्नो हातमा आउँछ वा आउँदैन भन्ने देखिन्छ।
एकता संयोजन समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले बालुवाटार बैठकमा आज तीन विषय राखे।
पहिलो, महाधिवेशन कसरी हुन्छ, महाधिवेशनमा चुनाव हुन्छ कि हुदैँन? नेतृत्व कसरी छानिन्छ?
दोस्रो, महाधिवेशनबाट नीति र विचारको विषय कसरी निर्क्यौल गरिन्छ।
तेस्रो, संगठनात्मक विषय समानताको आधारमा दुई पार्टीबीच एकता भएन भने त्यो एकता हुन्छ वा विलय?
प्रचण्डले बैठकमा राखेका यी तीनै विषयमा उनले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोमबार छलफल गरेका थिए।
प्रचण्डसँगको छलफलबारे ओलीले सोमबार साँझ बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
‘भविष्यमा कसरी जान्छ भन्नेमा उहाँ आश्वस्त हुन नसकेको देखियो’, ओलीले स्थायी समिति बैठकमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक एमाले नेताले भने।
प्रचण्डले आफूलाई नेतृत्वमा स्थापति गराउने हो भने माओवादी पार्टीको विचार र नीतिलाई पनि त्यहीअनुसार एकीकृत पार्टीको दस्तावेजमा समेट्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
'माओवादी पार्टीको विचार र नीतिको ‘लिगेसी'ले दस्तावेजमा ठाउँ पाएन भने माओवादी पार्टी हाँकेको नेतृत्व भोलि कसरी एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित हुन सक्छ भन्ने आंशका प्रचण्डमा देखियो,’ ती एमाले नेताले भने।
एमाले-माओवादीबीच फागुन ७ मा भएको पार्टी एकता गर्ने ७ बुँदे सहमतिबाट उत्साहित भएका प्रचण्डको मनमा आशंकाले बिस्तारै जरो गाड्दै गएको देखिएको छ।
त्यो ७ बुँदे समहतिको मूल आधार ओली र प्रचण्डबीच धेरै पटक भएका वार्ता थिए। ती वार्ताहरूमा ओलीले एकता महाधिवेशनपछि प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने विश्वास दिलाएका थिए।
‘महाधिवेशबाट सहमतिमै अध्यक्ष बनाउने आश्वासन ओलीले दिएपछि उत्साही देखिएका प्रचण्डको मनमा अहिले आएर पछि अध्यक्ष बनाएनन् भने के हुन्छ भन्ने? भन्ने प्रश्न हावी भएको छ,’ एक एमाले नेताले भने ‘उहाँ तरंगित हुनु भएको त्यसैले हो।’
प्रचण्डले आफूलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाउने कुराको ग्यारेन्टी अहिले नै खोजेको पनि बताए।
'प्रचण्डले अहिलेनै यस्तो विषयमा ग्यारेन्टी खोजको छन्, जसको कुनै उत्तर छैन,' उनले भने।
प्रचण्डको मनमा आशंका उब्जिनुको एउटा कारण माधव नेपालको पनि भएको ती एमाले नेताको दाबी छ।
माधव नेपालले पछिल्लो समय दुई पार्टीबीच एकताको समर्थनमात्र गरेका छैनन्, त्यसको पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। आफ्नो ठाँउबाट प्रयत्न गरेका छन्।
एमाले नेताका अनुसार 'कतै केपी ओलीले माधव नेपाललाई पनि आफूलाई जस्तै महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउने आश्वासन त दिएका छैनन्’ भन्ने आशंका अहिले प्रचण्डको मनमा छ।
'यत्रो पार्टीको अध्यक्ष अर्कोलाई दिन्छुभन्दा पनि मावध नेपाल किन केही बोल्दैनन्। किन माधव नेपाल उज्याला छन्। यस्ता प्रश्नले पनि प्रचण्डलाई पोलेको छ,' ती नेताले भने।
यिनै आशंकाबीच प्रचण्ड र माधव नेपालबीच सोमबार प्रचण्डनिवास खुमलटारमा कुराकानी भएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेताका अनुसार प्रचण्डलाई खिलझैं बिझेको अर्को विषय केही गरी पार्टी एकतापछि कुरा बिग्रियो भने 'आफूहरू सकिन्छौं’ भन्ने हो।
'पार्टी एकतापछि सबै सांसद एकीकृत पार्टीका सांसद बन्छन्। पार्टी फुटाउन ससंदीय दल र केन्द्रीय समितिमा समेत चालिस प्रतिशत चाहिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘चुनावको मुखमा पनि पार्टी फुटाउन सजिलो हुन्न। नयाँ पार्टीमा सबै जान्छन् भन्ने छैन। फुटेको पार्टी झन् सानो हुन्छ।’
प्रचण्डले एकता संयोजन समितिको बैठकमा मंगलबार यी आशंकालाई महाधिवेशनसँग जोडेर प्रवेश गराएका छन्।
‘जनयुद्धबाट आएको माओवादी र संसदीय राजनीतिबाट आएका दुबै दलको राजनीतिमा योगदान बलियो छ। आज विचारको कुरा मानिएन भने समाज परिवर्तनमा माओवादी आन्दोलनले भूमिका खेलको लेखिएन भने माओवादीको विचार असफल भएको भ्रम पैदा हुन्छ', प्रचण्डले बैठकमा भने।
अहिले मस्यौदा गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्ड खुसी नहुनुको अर्को पनि कारण रहेको एक माओवादी नेताले बताए।
‘प्रचण्डले माओवादीमा रहेर २५ वर्षदेखि पार्टीको राजनीतिक डकुमेन्ट तयार पार्नु भएको छ। जसमा उहाँले आफ्ना योगदानबारे मात्रै लेखाउनु भएको छ,’ उनले भने ‘प्रचण्डपथनै भनेर पार्टीले मानिसकेको नेताको योगदानबारे अहिलेको प्रतिवेदमा खुलेर उल्लेख नगरिएकोमा उहाँ खिन्न हुनुभएको छ।’
प्रचण्डले मंगलबार एकता संयोजन समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबारे पनि बोले।
'हामीले महाधिवेशनसम्म दुई जना अध्यक्ष भनेका छौं। यो दुबै जना कार्यकारी हो कि एक जना सेरेमोनियल हो', प्रचण्डले भने,'प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा उहाँ कार्यकारी अरू सेरोमेनियल जस्तो देखिन्छ।’
माओवादी मन्त्रीलाई थाहै नदिकन सचिवहरूको सरूवा गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कार्यशैली देखाएको उनको भनाइ छ।
प्रचण्डपछि बोलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको विधिबारे प्रचण्डको प्रमुख चासोमा केही बोलेनन्।
उनले धेरैजसो समय सचिव सरुवा र उनको कार्यशैलीबारे बोलेर बिताए।
‘नभनिकन सचिव सरूवा गरेको होइन। मन्त्रीले सचिव चलाउने पद्दतीले सुशासन बिग्रियो भनेर मैले पहिल्यै भनेको हुँ' ओलीलाई उद्धृत गर्दै संयोजन समितिका एक सदस्यले भने ‘गृहसचिव सरुवामा गृह मन्त्रीलाई जानकारी गराएको थिएँ।’
ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई बैठकमै 'बेस्ट मान्छे पठाइदिन्छु भनेको हो कि होइन, सल्लाह गरेको हो कि हैन?' भनेर प्रश्न गरेका थिए। बादल भने अक्कमक्क परे। उनले पार्टी बैठकमा माओवादी मन्त्रीहरुलाई नसोधिकन सचिव सरुवा गरिएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
ओलीले एकता गर्दा संगठनमा यति र उति प्रतिशत तोक्न नहुने बताए।
'यति प्रतिशत पनि नभनौं, समानताका कुरा पनि नभनौं। व्यवहारिक हिसाबले मिलाउँ,’ उनले भने।
दुबै अध्यक्षको धारणापछि बैठकले प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको छ।
यो विवादसँगै वैशाख ९ गते गर्ने भनिएको एमाले-माओवादी एकता अहिलेलाई टरेको छ।
पछिल्ला दिनमा गहिरिँदै गएका प्रचण्डका आशंकाका बादल अब फाटछन् वा फाटदैनन् वा कहिले फाटछन् एमाले-माओवादी एकता त्यसैमा निर्भर हुनेछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ४, २०७५, ११:५०:५३